Tetikasa hevitra sary hosodoko 3D mahazatra ho an'ny jamba | Famoronana an-tserasera
Ny sary hosodoko vita pirinty 3D namboarina dia ahafahan'ny jamba "mahita" ireo sanganasa malaza ireo
3D mpanonta no manokatra tontolo mety hitranga na aiza na aiza no misy utility. Ny asa toy ny fitondrana ny iray amin'ireo mpanonta ireo eny amin'ny habakabaka hamoronana fitaovana dia iray amin'ireo fahaiza-manao tsy mampino izay mifandraika amin'ity fahafaha-mamorona zavatra 3D ity izay mety ho tena sarotra tokoa.
Iray amin'ireo hevitra tsy mampino ireo dia avy amin'ny tetikasa The Unseen Art, izay noforonin'ilay mpamorona endrika any Helsinki, Marc Dillon, izay mampiasa 3d pirinty hanomezana fahafaha-miaina ny jamba ny zavakanto amin'ny alàlan'ny fahatsapana toy ny mikasika. Hetsika mahafinaritra izay mitondra antsika any amin'ny latitude hafa azon'ny fitaovana iray toy ny mpanonta 3D.
«Alao an-tsaina hoe tsy hainao manao ahoana ny tsikin'i Mona Lisa, na manao ahoana ny voninkazo volon'i Van Gogh. Alaivo an-tsaina hoe mandre olona maro miresaka momba an'io ianao ary fantany ny fisiany, fa tsy afaka miaina izany ho an'ny tenanao ianao. Ho an'ny olona an-tapitrisany jamba dia zava-misy izany.«Milaza ny tetikasa ao anaty horonan-tsary.
Mampiasa teknolojia 3D izy ireo ary Fanontana 3D amin'ny fasika hamerina ireo zavakanto kanto ireo amin'ny ambaratonga sy kalitao azo apetraka ao amin'ny tranombakoka. Amin'izany fomba izany no anombanany ny fahatsapana omen'ireto sangan'asa ireto ho an'ireo olona izay, amin'ny alàlan'ny fikasihana, dia afaka manohina ny tenany ka hatraiza ny halehiben'ny molotra amin'ilay asa nataon'i Leonardo da Vinci.
Na dia tsy manam-paharoa aza ny tanjona dia tsy ny tetikasa Unseen Art no voalohany nanana an'io hevitra io. Fanontana 3D no nampiasaina taloha ovay ny sary ho "fahatsiarovana azo tsapaina", ary efa nanampy vehivavy jamba mihitsy aza "hahita" ny zanany tamin'ny alàlan'ny fitarafana fony izy mbola bevohoka.
Ny Art tsy hita dia hita ao anatin'ny tetikasa IndieGoGo iza no afaka ampiana hahita ny famatsiam-bola kendrenao ary hanao azy ho zava-misy lehibe.
Rohy mankany IndieGoGo, Facebook y tranokala manokana.
Asa hafa mety hahaliana anao angamba ity projet ity amin'ny 3D tsara kalitao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary hosodoko vita pirinty 3D namboarina dia ahafahan'ny jamba "mahita" ireo sanganasa malaza ireo